भारतीय नाकाबाट भित्रिन्छ अवैध हतियार ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार भारतीय नाकाबाट भित्रिन्छ अवैध हतियार !
काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने हतियार भारतीय भूमिबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानले साना तथा ठूला हतियार भारतबाट नेपाल भित्रिने गरेको देखाएको हो । खुला सीमानाका कारण भारतबाट सहजै नेपालमा हतियार भित्र्याइने गरेको हो । त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ सँग जोडिएका भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हतियार भित्रिने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
भारतबाट भित्रिने यस्ता अवैध हतियार र नेपालमै उत्पादित साना–घरेलु हतियार सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको पाइएको छ । विभिन्न स्थानमा भएको आपराधिक क्रियाकलापमा साना हतियार त्यसमा पनि कटुवा पेस्तोलको प्रयोग बढ्दो छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल भने पछिल्लो समय हतियारधारी समूह–व्यक्तिसँगै हतियार बरामदमा समेत सफलता प्राप्त गरेको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम लागु भएपछि पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै देशभर विभिन्न स्थानबाट अवैध हातहतियारसहित २ सय ४२ जना मानिस पक्राउ परेका छन् । पक्राउमध्ये पुरुष २ सय ३६ जना र महिला ६ जना छन् । १७ जना विदेशी नागरिक छन् । यो अवधिमा एलएमजी राइफल १ थान, पोइन्ट टुटु राइफल १ थान, एसएमजी २ थान, एमसिक्स्टीन एटु राइफल १ थान, पेस्तोल ३८ थान, बन्दुक १४ थान, कटुवा पेस्तोल ३६ थान बरामद गरिएको छ ।
यस्तै रिभल्वर ३ थान, भरुवा बन्दुक १ सय १८ थान गरी जम्मा २ सय १४ थान अवैध हतियार र ६ सय ८० राउण्ड गोली बरामद भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ । नौ महिनाकै अवधीमा अवैध हातहतियारअन्तर्गत जम्मा १ सय ६५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यले अवैध हातहतियार र यसको जोखिमबारे जनचेतना जगाउन सफल भएपछि अवैध हतियार राखेका व्यक्तिहरू समेतले हतियार प्रहरीमा बुझाएको पोखरेल बताउँछन् । डीआईजी पोखरेलले भने, ‘‘सूचना नेटवर्कलाई मजबुत पारिएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले सूचना प्रवाहमा वृद्धि हुन थालेपछि ठूलो मात्रामा अवैध हतियार वरामद भएको हो । कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ भइरहेका छन् ।’’
बरामद भएका हतियारमध्ये पेस्तोल, रिभल्वरको साथै नेपालमै बनेका कटुवा पेस्तोल बढी छन् । आपराधिक गिरोहले उपलब्ध गराउने यस्ता हतियारले साना र ठूला संगठित अपराध बढ्दै गएको घटनाक्रमले देखिन्छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार अवैध हतियार तस्करी, हत्या, अपहरण, डकैती, लुटपाट, जबरजस्ती चन्दा असुली तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको शिकारमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
अवैध हातहतियार नियन्त्रण तथा कारोबारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले देशभरिनै अभियान चलाएको छ । सीमाक्षेत्रमा प्रहरी बढी सक्रिय छ । पछिल्लो एक सातामा रुपन्देही र बाँकेमा भारतीय अपराधी समूहले नेपाल प्रहरीमाथि नै आक्रमण समेत गरेको छ ।